Xafladda Arooska Lionel Messi Oo Caawa Dhacaysa, Xiddigaha Imika Soo Gaadhay Goobta Arooska Iyo Shirkad Yuhuud Ah Oo Amaanka Sugaysa - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Xafladda Arooska Lionel Messi Oo Caawa Dhacaysa, Xiddigaha Imika Soo Gaadhay Goobta...
Waxaa lagu soo qulqulayaa magaalada Rosario ee dalka Argentina halkaas oo uu ka dhici doono arooska Lionel Messi iyo Antonella Roccuzzo waxaana dadka haddaba magaalada Rosario soo gaadhay ka mid ah xidigaha ay Lionel Messi soo wada ciyaareen ama ay hadda wada ciyaaraan ee kala ah Xavi Hernandez, Charles Puyol, Sergio Busquets, Jordi Alba, Cesc Fabregas Iyo Samuel Eto’o waxaana wehelinaya xaasaskooda balse waxay ka mid yihiin 260 qof oo arooskan lagu casuumay
Dadka ugu caansan kubada cagta iyo weliba madadaalada ayaa isagu tagi doona magaalada Rosario ee dalka Argentina maalinta Jimcaha ee June 30 waxayna haddaba marti sharafta Lionel Messi iyo Antonella Roccuzzo ay soo gaadhayaan dalka Argentina si ay ugu sii diyaar garoobaan xaflada loo bixiyay arooska qarniga ee Lionel Messi iyo Antonella Roccuzzo.
Fanaanada ree Colombia ee Shakira iyo ninkeeda Gerard Pique oo ay Lionel Messi ka wada tirsan yihiin kooxda Barcelona isla markaana ay ka soo wada baxeen xarunta La Masia ayaa ka mid ah dadka iyaguna soo gaadhi doona goobtan. Lionel Messi ayaa arki doona saaxiibadiisa ay MSN wadaagaan oo goobta arooskiisa cagta soo dhigi doona.
Caruusada loo casuuman yahay ee Antonella Roccuzzo oo 29 sanno jir ah ayaa xidhan doona dhar uu sameeyay nashaqadeeyaha caanka ah ee Spain u dhalatay ee Rosa Clara taasoo laga soo duuliyay Barcelona.Waxay Rosa Clara hore dhar ugu soo sameeysay aktarada Eva Longoria iyo Sofia Vergara iyo sidoo kale boqorada dalka Spain Letizia.
Lionel Messi iyo Antonella Roccuzzo ayaa loo diyaariyay isla markaana si khaas ah loogu qurxiyay Huteelka City Center ee magaalada Rosario waana goob loo xulay in uu ka dhaco arooska ay ka soo qayb gali doonaan 260 ka qof ee u badan dadka ku lugta leh kubbada cagta.
Lionel Messi oo todobaadkii hore noqtay 30 sano jir ah ayaa la sheegayaa inuu weydiistay cuno kariyayaasha arooskiisa inay kariyaan cuno maxali ah oo ay dadka reer Argentina dhaqan u leeyihiin.Kooxda fanaaniinta reer Uruguay ee Rombai iyo Marama iyo weliba fanaanada Karina oo ah xaaska xiddiga Argentina Sergio Aguero ayaa ka ciyaari doona arooska.
Amaanka waxaa sugaya shirkad gaar loo leeyahay oo Israa’iil ah kuwaasoo inta badan suga amaanka xiddigaan mar walba uu dhacdooyin waa weyn ka qeybgalayo.
Ilaa iyo 155 joornaaliiste ayaa loo ogolaaday inay soo tabiyaan arooska, laakiin waxaa looga digay inay wax xiriir ah la sameeyaan martida. Ilaa maanta waxay marti sharafka Lionel Messi iyo Antonella Roccuzzo ay soo gaadhi doonaan dalka Argentina si ay barri iyaga oo diyaar ah ugu soo baqoolaan goobta loo asteeyay arooskan.